သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇော - ဝီကီပီးဒီးယား
သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇောသည် အီရန်နိုင်ငံထုတ် ပါရှန်ကော်ဇောများထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သဗ်ရီးဇ်မြို့တွင် ရက်လုပ်သည်။ ဤမြို့သည် အီရန်နိုင်ငံတွင် ကော်ဇောရက်လုပ်ရာ၌ ထင်ရှားသောမြို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းမြို့ထွက် ကော်ဇောများသည် အရောင်အသွေးဒီဇိုင်းများ စုံလင်လှသည်။ သဗ်ရီးဇ် မြို့သည် လက်ရှိကမ္ဘာ့လက်မှုပညာအဖွဲ့အစည်းမှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကော်ဇော ရက်လုပ်သည့်မြို့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ .
၁ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောသမိုင်းအကျဉ်း
၂ သဗ်ရီးဇ် မြို့ထွက်အချို့သော ကော်ဇောနမူနာဒီဇိုင်းများ
၃ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော၏ နည်းပညာအသစ်များ
၄ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများ၏အရောင်ရောစပ်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲလာခြင်း
၅ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများ ရက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထူးကဲမှု
၆ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော၏သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ အရင်ကတည်းက ထိုမြို့၏အနုပညာလက်ရာမြောက်မှုသည် ဆဖွဝီယဲခေတ်ကာလမတိုင်မီကဟု ဆိုရပေမည်။ ၁၅ ရာစုနှစ်၏ ဒုတိယနှောင်းပိုင်းကာလဖြစ်သော ဆဖွဝီခေတ်ကာလတွင် ကော်ဇောရက်လုပ်မှုသည် ကျေးလက်ရက်လုပ်မှုအနေအထားမှ တော်ဝင်မြို့ပြအနေအထားအထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် နောက်ထပ်အရေးပါသော တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုမှာ သဗ်ရီးဇ် နှင့် ဟရာသ်မြို့များမှ တော်ဝင်အနုပညာရှင်များ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်လာမှုများ ဖြစ်သည်။ Rugs and Carpet of The world-Ian Bennet ရေးသားသောစာအုပ်တွင် သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားသည်မှာ ( ၁၆ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းကာလဖြစ်သော ပထမ ရှားဟ်အစ္စမာအီးလ် နှင့် သဟ်မာစဗ်ဘုရင် လက်ထက်မှစ၍ ပန်းဒီဇိုင်းများနှင့် အရောင်အသွေးစုံလင်သော ကော်ဇောများကို အပ္စလီးမီး ဟုခေါ်တွင်သော ပန်းချီလက်ရာ၊ တိရစ္ဆာန်ပုံနှင့် လူပုံများပါသော အဆင်အမျိုးမျိုးကို ရက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။) ဖော်ပြပါစာအုပ်တွင် စာရေးသူသည် ၁၆ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းကာလက ရက်လုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီး ပြတိုက်များတွင် ပြသထားသော ကော်ဇောများကို သဗ်ရီးဇ် မြို့ထွက် ကော်ဇောများဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၁၇ ရာစုနှစ်နောက်ပိုင်း အီရန်ကော်ဇောများ နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးပြီးနောက် ဥရောပနှင့် အမေရိကတို့သည်လည်း ကော်ဇောများလိုက်၍ ရက်လုပ်လာကြချိန် ထိုနိုင်ငံများရှိ ဈေးကွက်ကို သဗ်ရီးဇ်မြို့ ကော်ဇောအနုပညာရှင်များက မိမိတို့၏ အနုပညာဈေးကွက်သာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ကျုးနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အလွန်စိတ် ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှသည်။ 
သဗ်ရီးဇ်မြို့သည် အီရန်နိုင်ငံ၌ ကော်ဇောရက်လုပ်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အလွန်အရေးပါသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့မှ ကော်ဇောများသည် ကမ္ဘာအနှံ့ နာမည်ကြီးပြတိုက်များတွင် အလှတရားအနေနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နံရံကပ်ပန်းချီများအနေနှင့်သော်လည်းကောင်း နေရာယူလျက်ရှိသည်။ ဈေးကွက်အတွင်း အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုများအကြား အမြဲထိပ်တွင် နေရာယူလျက်ရှိပြီး ဝယ်ယူသူတို့၏ အကြိုက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ လက်ရှိစစ်တမ်းများအရ သဗ်ရီးဇ်မြို့နှင့် ၎င်းမြို့၏အနီးတစ်ဝိုက်မှ အီရန်နေသက္ကရာဇ် ၁၃၆၄ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိသော ကော်ဇောပေါင်း ၁၆၀၀၀ ရက်လုပ်ရာတွင် ရက်လုပ်သူပေါင်း ၃၂၁၅၀ ကရက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရက်လုပ်မှုများ နေရာအသီးသီးရှိ အလုပ်ရုံများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အရင်ကတည်းက ကော်ဇောများ ရက်လုပ်ခဲ့ကြပြီး လက်ရှိလည်း ရက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ များမကြာသေးမီ လွန်ခဲ့သည်နှစ်များက သဗ်ရီးဇ်လက်ရက်ကော်ဇောများတွင် အလွန်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသော ပိုးချည်များဖြင့် ကြိုးလိုင်း ၅၀×၆၀ အကျယ်အဝန်း (ရက်လုပ်မှုအခေါ်အဝေါ်) ရှိသည့်ကော်ဇောများကိုပင် ရက်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သော ပိုးချည်များဖြင့် ရက်လုပ်သော ကော်ဇောများတွင် လေးထောင့်အလယ်၌ အလွန်လက်ရာမြောက်သော ပန်းဒီဇိုင်းများကို ယှဉ်၍ ဖျော့သောအရောင်လေးများဖြင့် ရက်လုပ်ကြပြီး ပန်း၏အရောင်များကို ရွေးချယ် ရက်လုပ်ရာတွင်လည်း စွရ်ခါဗီး အိုနာဗီး (လှပသောအနီရောင်လေးများ) ဇိုင်သွန်နီး စသည်ဖြင့် အရောင်အသွေးများစုံလင်စွာ ရွေးချယ် ရက်လုပ်ကြသည်။
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများမှာ နှစ် ၇၀ အရင်ကများသောအားဖြင့် ပန်းအိုး၊သစ်ပင် ဒီဇိုင်း၊ မဲဟ်ရာဘီး- ဂုံး ၊ ဖန်ပဒိုင်းပုံ၊ တိရိစ္ဆာန်ပုံနှင့် သဘာဝရှုခင်းပုံများ၊ အကိုင်းအခက်ပုံများ၊ ဂွလ်ဖှရန်းဂ်-ဘန်ဒီးခရှ်သီး နှင့် ကာဗေကွရ်အာန်နီး ဆိုသည့်ဒီဇိုင်းများ၊ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းများ အကြီးအသေး စသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံတို့ကို ကော်ဇောပညာရှင်များက ရက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကနုတ်ပန်းအနွယ်အခက်အသေး ဒီဇိုင်းများရက်လုပ်ခြင်းကို သဗ်ရီးဇ် အနုပညာရှင်များက ထင်သလောက်သဘောမတွေ့ကြချေ။ လက်ရှိအနေအထားတွင် သဗ်ရီးဇ်သည် အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျာန် မြို့များရဲ့၏ ကော်ဇောများရက်လုပ်ရာ၏ အချက်အချာ ဒေသအဖြစ်လည်း သိရှိထားကြပြီး အဓိကအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်သူများသည် နာမည်ကောင်းတစ်လုံးနှင့် ကျော်ကြားနေကြသလို အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျာန် ကောဇောများသည်လည်း နာမည်ကြီးလျက်ရှိသည်။
သဗ်ရီးဇ်သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ကော်ဇောရက်လုပ်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများအကြား ထင်ရှားသော ကော်ဇောများ ရက်လုပ်ရာဒေသ ဖြစ်ပြီး ထိုမြို့ထွက်ကော်ဇောများသည် လူကြိုက်အများဆုံးကော်ဇောများ ဖြစ်သည်။
သဗ်ရီးဇ် မြို့ထွက်အချို့သော ကော်ဇောနမူနာဒီဇိုင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော၏ အချို့သောဒီဇိုင်းများမှာ မွတ္စသောင်ဖှီး၊ ပန်းပုံသဏ္ဌာန်ပါ အပ္စလီးမီး၊ လေးထောင့် အပ္စလီမီး၊ ငါးပုံသဏ္ဌာန်၊ ပန်းအိုး၊ မှန်စီရွှေချ နန်းတော်ပုံများ၊ သစ်ပင်ပုံ၊ ရုပ်ပုံကားချပ်ဒီဇိုင်းများ၊ ဥယျာဉ်ပုံ၊ သဘာဝရှုခင်းပုံများ စသည်ဖြင့်ရက်လုပ်ကြသည်။
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော၏ နည်းပညာအသစ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆယ်စုနှစ်များအရင်က သဗ်ရီးဇ်ကောဇောများ၏ နည်းပညာအနေအထားတစ်ခုကြောင့် ထိုမြို့၏အကောင်း ဆုံးကော်ဇောများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှု အရောင်စပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွန့်ဦးဆန်းသစ် တီထွင်မှုများကြောင့် အီရန်၏ အကောင်းဆုံးကောဇောများ ဖြစ်လာသည်။
လက်ရှိ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများ၏ အရောင်အဆင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အနုစိတ်ရက်လုပ်၍ အထူးအနုပညာ လက်ရာမြောက်သော ကော်ဇောများသည် သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများသာဖြစ်သည်။
သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇောများတွင် နောက်ထပ်ပြောင်းလဲလာသည့်အရာမှာ ဒီဇိုင်းများ၏နောက်ခံအရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းများအကြား လိုက်ဖက်ညီသော အရောင်များကို အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ကြပြီး ဤကဲ့သို့သော အနုပညာများကို အညို အမှိုင်းဘက်ပါသော ဒီဇိုင်းများတွင် တွေ့ရသည်။
တစ်ဖန်သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများ၏ ဆန်းသစ်လာမှုမှာ အရောင်များသုံးပြီး အရိပ်ပုံဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းများနှင့် ဆင်တူယိုးမှားအရောင်များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အမြင်တွင်ထင်ရှားလှပစေသည်။ အခြားသော ထူးကဲမှုမှာ (ပန်းချီပညာအရ) အပူရောင် အအေးရောင်များကို ကောင်းစွာ အသုံးချတတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ဖျော့သောအရိပ်ပုံဖော်မှုကို ပန်းဒီဇိုင်းနှင့် လိုင်းများအကြား အသုံးပြုကြသည်။ ထိုသို့သော အရိပ်ပုံဖော်မှုသည် ပန်းဒီဇိုင်းများကို ပို၍ သဘာဝဆန်စေသည်။
ပန်းနှင့်သစ်ရွက်ဒီဇိုင်းများ၏ အနားကွပ်များကို ပိုးချည်အဖြူ၊ အခြားသော အရောင်များ နှင့် ချယ်သရက်လုပ်ခြင်းတို့သည်လည်း သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော၏ အခြားသောထူးကဲမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
သဗ်ရီးဇ် ၏ ဒီဇိုင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ အညိုအမှိုင်းဘက်ပါသော အရောင်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောသီးသသန့်အရောင်များမှာ ခပ်မှိုင်းမှိုင်းအရောင်များဖြစ်သော မီးခိုးမှိုင်းရောင်၊ သံလွင်ဆီရောင်၊ ဇီးရောင် တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအရောင်အသွေးဒီဇိုင်းများသည် ကုန်လွန်ခဲ့သော အီရန်၏ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများ၊ နန်းတွင်းတော်ဝင်လက်ရာများ၊ ကဗျာ သဒ္ဒါအနုပညာရှင်များမှ အဓိကရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများ ရက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထူးကဲမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန်နှင့် တူရကီတစ်ဝိုက် ကော်ဇောများ၏ တူညီသောထူးကဲမှုများမှာ အားလုံးထက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်သည်။ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ကျေးလက်ဒေသများတွင် အထူးသဖြင့် ရှေးအရင်ကော်ဇောများ၌ သိုးမွှေးဖြင့်ရက်လုပ်ပြီး အများအားဖြင့် ဖှါရစီတွင် စဘွတ္က ဟု ခေါ်တွင်ကာ သိုးမွှေးဖြင့် ရက်လုပ်ရာတွင် ကြိုးလိုင်းအထူများကို အသုံးပြုကြသည်။ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ကျေးလက်ကော်ဇောများသည် အများအားဖြင့် ကြိုးလိုင်းအထူ ၁၅ မှ ၂၅ အထိ အသုံးပြုကြပြီး ချိတ်ဆွဲရက်လုပ်မှုပုံစံမှာ မျိုးနွယ်စုတို့ ရက်လုပ်မှုမှအပ အားလုံးမှာ တိုင်ထောင် ရက်လုပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ကော်ဇောများ နောက်ပိုင်းရက်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသော အတိုင်းအတာမှာ ၃×၂ နှင့် ၃/၅×၂/၅ နှင့် ၄×၃တို့ ဖြစ်သည်။ ကော်ဇောအသေးစားများကို ရှေးယခင် ရက်လုပ်မှုများတွင် တွေ့ရသည်။ အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်များကို မကြာသေးမီ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ထိုဒေသတွင် ရက်လုပ်လာခဲ့ကြပြီး အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ကျေးလက်ကော်ဇောများတွင် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး တွေ့ရှိရသည်။ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများတွင် များသောအားဖြင့် ကြိုးလိုင်း ၂၄ မှစပြီး ၁၁၀ အထိ ရက်လုပ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ အောက်ခံကြိုးလိုင်းများအပေါ် မူတည်ပြီး ကော်ဇော၏ အရည်အသွေးကိုလည်း အကောင်းဆုံး တိုင်းတာနိုင်သည်။ ကြိုးလိုင်းများလေ ကော်ဇော၏ အရည်အသွေးကောင်းလေဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ကော်ဇောကို များသောအားဖြင့် ပိုးချည်နှင့် ဝါဂွမ်း များမှ ရက်လုပ်ကြသည်။
သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇောများ အရှိန်အဟုန်ကောင်းလာသည်မှာ ၁၂ ရာစု ၁၃ ရာစု လောက်ကတည်းကဖြစ်ပြီး သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောသည် အနုပညာဒီဇိုင်းပုံစံ ၂၀၀ နှင့် ရက်လုပ်မှုနည်းပညာပိုင်း၊ အီရန်နီတို့၏ အရောင်ရွေးချယ်မှုတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ရက်လုပ်လာရာ ၁၄ ရာစုတွင် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး ကော်ဇောများ ဖြစ်လာသည်။ ကော်ဇောအနုပညာရှင်များ၏ ရက်လုပ်မှု နည်းပညာများကို ထိုမြို့တွင် ပြပွဲပြုလုပ်ရာ သဗ်ရီးဇ် သည် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင့်အတန်းအရှိဆုံး မြို့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ သို့ပါ၍ ၎င်းအနုပညာသည် သဗ်ရီးဇ် နှင့် အရ်ဒဘီးလ် မှ အခြေခံ၍ ပြန့်ပွားလာသော အကိုင်းအခက်များသာ ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ဒေသတစ်ဝိုက်သည် မြေယာစိုပြေမှု လယ်ယာလုပ်ကိုင်မှု မျှတသော ရာသီဥတုများရှိခြင်းကြောင့် ကော်ဇောရက်လုပ်ရန်အတွက် အမြဲဆိုသလို အသင့်တော်ဆုံး အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ သဗ်ရီးဇ် မြို့သည် ကော်ဇောရက်လုပ်ရာ မြို့များအကြား ထိုအနေအထားကို အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသော မြို့ဖြစ်သည်။ သဗ်ရီးဇ် သည် ဟရာသ် နှင့်အတူ ဟလာကူး မျိုးနွယ်တို့၏ အချိန်ကာလကတည်းက ကော်ဇောရက်လုပ်ရာတွင် အချက်အချာကျသောမြို့ ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ဆဖွဝီ များမင်းမူခဲ့စဉ်က ကော်ဇောရက်လုပ်သည့် အလုပ်ရုံကြီးများ ဆောက်လုပ်လာချိန် ရက်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များသည် ထိုမြို့တွင် စုဝေးလာပြီး အလွန်နူးညံ့လှပသော ကော်ဇောများကို ရက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးပြတိုက်များတွင် ပြသထားသော ကော်ဇောများသည် လည်းကောင်းတို့၏ အနုပညာလက်ရာများသာ ဖြစ်သည်။
ဆဖွဝီများဟရာသ်မှ သဗ်ရီးဇ် သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြချိန်တွင် အီရန်၏ ဒုတိယမြောက် အချက်အချာ အနုပညာမြို့သည် သဗ်ရီးဇ်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအနေအထားပေါ် အခြေခံပြီး မြောက်များစွာသော အနုပညာများ ဘက်စုံမျိုးစုံ စုဝေးတိုးတက်လာကာ သဗ်ရီးဇ် သည် အနုပညာလက်ရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူးဂရုပြု စိတ်ဝင်စားစရာမြို့ ဖြစ်လာသည်။ ထိုအနုပညာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့အကြား ကော်ဇောရက်လုပ်မှု အနုပညာသည်လည်း ဘဲဟ်ဇါးဒ် နှင့်ဆွလ်သွါန်မိုဟမ္မဒ် တို့၏ ရွေးချယ်အားပေးသော ပန်းချီပညာရှင် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကြောင့် အလွန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ဆဖွဝီ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အီရန်ကော်ဇောသည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အဖှ်ဂါန် တို့၏ (အနုပညာ) တိုက်ခိုက်ရင်ဘောင်တန်းလာမှုများကြောင့် ယိမ်းယိုင်ခဲ့သည်။ ကာဂျာရ် ခေတ်ကာလတွင် မိမိတို့၏ နေရာကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အီရန်ကော်ဇောများ စီးပွားဖြစ် ပို့ကုန်အဖြစ် အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန်နှင့် တူရကီ လမ်းကြောင်းမှ ဥရောပ သို့စတင်၍ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန်တွင် စုပုံနေတတ်သော အီရန်ကော်ဇောများသည်လည်း တဖြေးဖြေး ရောင်းကောင်းသဖြင့် ကုန်လွယ်တော့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သဗ်ရီးဇ် စီးပွားရေးသမားများ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အခြားသော မြို့ကြီးများဖြစ်သော မရှ်ဟဒ်၊ ကီရ်မါန်၊ ကာရှားန်၊ အေရာ(က်) နှင့် ဟမဒါးန်မြို့များသည် ရက်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသော မြို့များဖြစ်လာသည်။ သဗ်ရီးဇ် သည် ၁၉ ရာစုအနှောင်းပိုင်းနှင့် ဟစ်ဂျရီ ၁၃ ရာစုနှစ်၏ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်လောက်မှစ၍ ထိုမြို့၏စီးပွားရေးသမားများ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ဦးစွာတင်ပို့ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။
အီရန်ကော်ဇော ရက်လုပ်ခြင်း တိုးတက်ပြောင်မြောက်လာမှုသည် ကာဂျာရ်ခေတ်ကာလ အနှောင်းပိုင်းနှင့် ပဲဟ်လဝီမင်းဆက် အစပိုင်းတွင် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်လာနိုင်ခြင်းနှင့် အီရန်၏ အခြားသော ဒေသများတွင် လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်လာရခြင်းမှာ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျာန် နှင့် အထူးသဖြင့် သဗ်ရီးဇ်မြို့မှ စီးပွားရေးသမားများ၊ ကုန်သည်များနှင့် ကော်ဇောအနုပညာရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြိုးပမ်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးစီးလ်အဒ်ဝါရဒ် ဆိုသူက အီရန်ကော်ဇောများ ဥရောပနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားသည်မှာ- ထိုပို့ကုန်သည် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော သဗ်ရီးဇ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လက်ဝယ်တွင် ရှိခဲ့သည်။ ထိုသူတို့၏ အရောင်းစင်တာများသည် အစ္စတန်ဘူးလ် မှာပင် ဆိုင်ခွဲများ ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကရောင်းဝယ်မှုမှာ နိုင်ငံခြားမှ စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် ပတ်သက်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ မြေယာများဝယ်ယူခြင်း ၎င်းပစ္စည်းများကို သရ်အဘူဇါန် လမ်းကြောင်းမှ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် နှင့် ဟမဒါန် မှ ကော်ဇောများကို အစ္စတန်ဘူလ် လမ်းကြောင်းမှ ဂျာမနီ နှင့် ဗြိတိသျှ သို့ တင်ပို့ပြီး စွလ်သါန်အာဘာဒ် နှင့် ကီရ်မါန် မှကော်ဇောများကို ရှိုမားလ်ဘက် ပင်လယ်နီ၊ ဘန်ဒဲရ်အဘာစ် လမ်းကြောင်းများမှ အမေရိက ဘက်သို့ တင်ပို့ကြသည်။
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောထုတ်လုပ်ရာတွင် မိမိတို့၏ လက်ရက်များပင် ပါဝင်ပြီး နာမည်ကျော်၍ ပို့ကုန်အဖြစ် အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချနိုင်သူအချို့ကို ဖော်ပြရသော်- ဟာဂျ်ယူစွဖှ်ကာလီကျီး၊ ဟာဂျ်အဗ်ဒွလ္လာကာလီကျီး၊ ဟာဂျ်မီးရ်ဇာဂျာအ်ဖှဲရ်အစ္စလာမ်ဘူလ်ကျီး၊ ဟာဂျ်ဆွမဒ်ကရဲကာလီကျီး မီရ်ဇာအလီအပ္စဂဲရ်၊ မီရ်ဇာအလီအပ္ကဘဲရ်၊ အစ္စမါအီလ်ကာလီကျီး၊ စဒ်ကယာနီး၊ အဘ်ကကျီး၊ ဟာဂျ်မိုဟမ္မဒ်မမ်ကာနီ၊ မာဟ်မူဒ်အွတ်ဖှ်၊ ဒီလ်မကာနီး၊ အဝါကီးယါန်၊ ကာစဗါရီးယါးန်၊ အူရ်ဒူဘာဒီးတို့ ဖြစ်သည်။
သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇော ရက်လုပ်သူများသည် ဒီဇိုင်းအလှအပမှန်သမျှကို ရွေးချယ်ပြီး အရောင်စုံလင်စွာဖြင့် ရက်လုပ်ကြသည်။ ဆန်းသစ်မှုများနှင့်တကွ-လေးထောင့်အလယ်ပန်းဒီဇိုင်း၊ သစ်ပင်ပုံများ၊ ပန်းအိုးပုံစံနှင့်၊ ဘွတ်သဲဟေဂျပ်ကဲ (ပါးရှန်းအခေါ်) စသည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံတို့ကို ရက်လုပ်ကြသည်။ တောက်ပ၍ အရောင်လွင်သော ကော်ဇောများကို အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် မှ ရက်လုပ်သည့် ကော်ဇောများအား ဝယ်ယူသူများက နှစ်သက်ကြသည်။ လချပ်က်၊ သရန်ဂျ်ဟန်ဒစီယေဟရီးစ် ကော်ဇောတို့၏ အလှဒီဇိုင်းများကို ယနေ့ထိတိုင် သဗ်ရီးဇ် နှင့် အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် မြို့ရွာများမှ ကော်ဇောရက်လုပ်သူများသည် ကော်ပီကူးယူ ရက်လုပ်ကြပြီး ဟရီးစ်ဒီဇိုင်း ဟူသည့်အမည်ဖြင့် ဈေးကွက်တွင် ဖြန့်ဖြူးကြသည်။ အမှန်တကယ် ဟရီးစ် ၏ရှေးယခင်ဒီဇိုင်းမှာ လချပ်က် နှင့် သရန်ဂျ်ရှားအဘားစီ ဒီဇိုင်းများကိုလည်း အသုံးပြုပြီး လေးထောင့်အဝိုင်းအရေးအကြောင်းအစင်းပုံများကို ရောယှက် ရက်လုပ်ကြသည်။ ထိုဒီဇိုင်းများအကြား နာမည်အကျော်ဆုံးမှာ လချပ်က်နှင့် သရန်ဂျ်ရှားခဲယေးရှေးကပ္စသဲ တို့ ဖြစ်ပြီး ဟန်ဒစီ ဒီဇိုင်းများမှာ အာဇဲရ်ဘိုင်ဂျန် ကျေးလက်ဒေသတို့၏ ထူးကဲသောဒီဇိုင်းများ ဖြစ်သည်။ ထိုကော်ဇောများတွင် အထူးသဖြင့် ပိုးချည်ဖြင့် ရက်လုပ်သော ကော်ဇောများသည် လချပ်က်၊ သရန်ဂျ် ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုပြီး လွင်၍တောက်ပသော အရောင်လေးများကို အသုံးပြုကြသည်။ ပန်းနှင့် အရေးအကြောင်းဒီဇိုင်းတို့၏ အရောင်များကို စဲရ်ခါဗီး၊ အိုနာဗီးဆိုသည့် အနီရောင်လေးများနှင့် ဇိုင်သူနီးအရောင်များကို အသုံးပြုကြသည်။ သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောများကိုနှစ် ၇၀ အရင်ကတည်းက ပန်းအိုး၊ သစ်ပင်၊ ဖန်ပဒိုင်း စသည့် ဒီဇိုင်းတို့သည် သဗ်ရီးဇ် ကော်ဇောအနုပညာရှင်တို့၏ အကြိုက်ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား အကြီးအသေးမျိုးစုံ ရက်လုပ်ကြသည်။
↑ Jacoby, Heinrich (1952). How to know Oriental carpets and rugs. Allen & Unwin, 15။ “Persian carpets: Tabriz, Ramadan, ...”
↑ Jacobsen, Charles W. (2007). Facts about Oriental Rugs. READ BOOKS, 2. ISBN 1-4067-0467-9။ “"Different weaves...Persian rugs..Bakhtiari..Kashan..Lorestan..Shiraz..Tabriz..”
↑ Template:یادکرد کتاب
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သဗ်ရီးဇ်ကော်ဇော&oldid=407080" မှ ရယူရန်